Xiaomi wuxuu soo bandhigi doonaa Redmi cusub bisha Janaayo 10 | Androidsis
Sannadku hadda wuu bilawday waxaana jira durbaba noocyo soo gabagabeynaya faahfaahinta soo bandhigistooda ugu horreysa. Midkood waa Xiaomi. Soo saaraha Shiinaha ayaa hadda ku dhawaaqay soo bandhigida taleefankaaga cusub, kii ugu horreeyay ee 2019. Waa qalab gaari doona kala duwanaanta Redmi, kan ugu dhaqaalaha badan soo saaraha Shiinaha.
Xiaomi Redmi cusub ayaa la soo bandhigi doonaa toddobaad gudihiis. Tan iyo markii sumadda wuxuu doortay 10 Janaayo inuu noqdo taariikhda taas oo aan ku ogaan karno taleefankan cusub. Hadda, lama sheegin taleefanka uu yahay midka la soo bandhigi doono, in kasta oo ay durba jiraan warar xan ah oo ku saabsan.
Redmi 7, Redmi Pro 2 iyo Redmi Go waa magacyada isku shaandheynta lagu sameeyay warbaahinta qaar. Iyagu waa musharixiinta ugu weyn ee lagu soo bandhigi doono dhacdadan bisha Janaayo 10. In kasta oo illaa iyo hadda Xiaomi aysan rabin inay ku sii deyso ballan qaad taleefanka oo ay ku soo bandhigayaan munaasabadda. In kasta oo ay u badan tahay inay ka tagi doonaan tilmaamo.
Faahfaahin kale oo soo jiidatay dareenka boodhadhka ay shirkaddu billowday inay ku dhawaaqdo soo bandhigidda ayaa ah waxaan aragnaa lambarka 4800 oo qoran. Tani waa wax dhaliyay dood badan sidoo kale. Warbaahinta qaar waxay tilmaameen toddobaadkan in qalabku ku imaan doono kamarad dhan 48 MP.
Hadda, ka dib markii lagu dhawaaqay Xiaomi, qaar waxay dhahaan waa batarikeeda 4.800 Mah. 48W ee xawaaraha degdegga ah ayaa sidoo kale la qiyaasayaa. Marka, sidaad u aragto, ma jiraan wax la taaban karo, laakiin ku dhawaaqistu waxay durbaba dhalisaa aragtiyo badan. Nasiib wanaag, ma sugi doonno waqti dheer si aan u ogaano.
10-ka Janaayo waxaan si rasmi ah u ogaan doonnaa qalabkan cusub ee 'Xiaomi', oo ku dhex jira inta u dhexeysa Redmi. Waxaa laga yaabaa inay jiraan ogeysiisyo ku saabsan toddobaadkan. Hadday sidaas tahay, waxaan si taxaddar leh u dhegeysan doonnaa haddii magaca gaarka ah ee taleefankan cusub ee sumadda Shiinaha la shaaciyey.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi waxay soo bandhigi doontaa nooc cusub oo ka mid ah heerka Redmi 10-ka Janaayo